Abaphathi beepropathi Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi Oklahoma City, Oklahoma
Abaphathi beepropathi ngaphakathi Oklahoma City
Abaphathi beepropathi ngaphakathi Oklahoma
I-RE / MAX Ulawulo lwePropathi ye-Arhente yeyona ndawo ilulawulo lolawulo kwipropathi e-Oklahoma City nakwimimandla ejikelezileyo, Sinikezela ngendlela ebanzi yolawulo, ekhathalela iimfuno zabanini bepropathi kunye nabaqeshi. Iqela lethu lisebenza nzima ukukhusela ixabiso nokukhulisa ukubuya kweepro...
Ipapashwe ngu energypmokc
umbono Abaphathi beepropathi ipapashiwe 7 months ago
I-Oklahoma ((mamela)) ngumbuso okumazantsi e-United States kwingingqi ye-United States, kumda we-Texas kumazantsi nasentshona, i-Kansas emantla, eMissouri emantla-ntshona, e-Arkansas empuma, eNew Mexico entshona, kunye neColorado kumantla asentshona. Yeyona ndawo ingama-20 ebanzi kakhulu kwaye yona ye-28 yeyona inabantu abaninzi e-United States. Abahlali bayo baziwa ngokuba zii-Oklahomans (okanye i-colloquically, "Okies"), kwaye idolophu enkulu kunye neyona dolophu enkulu i-Oklahoma City. Igama lombuso lisuselwa kumagama e-Choctaw okla kunye ne-humma, elithetha "abantu abomvu". Ikwabizwa ngokungacwangciswanga ngegama lesidlaliso sayo, "I-The State mapema", ngokubhekisele kubemi abangabemi boMdabu aba bafaka amabango abo kumhlaba ophambi komhla wokuvulwa ngokusesikweni kwemihlaba kwintshona ye-Oklahoma Territory okanye ngaphambi komthetho obekiweyo wamaNdiya we-1889, eyonyuse ukuhlala kwabantu baseYurophu-eMelika kwiMpuma yeIndiya. I-Oklahoma Territory kunye neNdawo yeIndiya yadityaniswa kwi-Oklahoma xa yaba lilizwe lama-46 lokungena kwimanyano ngoNovemba 16, 1907. Ngeendawo zakudala zeentaba, i-prairie, meses kunye namahlathi asempuma, uninzi lwe-Oklahoma lulele kwiThafa Elikhulu. I-Cross Timbers, kunye ne-US Interior Highlands, yonke imimandla ithanda ukuba shushu kakhulu. I-Oklahoma ikwimimandla emithathu yenkcubeko yaseMelika kunye nenkcubeko eyayisebenza njengendlela yokuqhuba iinkomo, indawo ekuhlala kuyo abahlali baseMazantsi, kunye nomhlaba owabelwe ngurhulumente ngumaMelika aseMelika. Zingaphezulu kwe-25 iilwimi zaseMelika zoMdumba ezithethwa e-Oklahoma.Umvelisi ophambili wegesi yendalo, ioyile, kunye neemveliso zezolimo, u-Oklahoma uthembele kwisiseko soqoqosho sokuhamba ngenqwelo moya, amandla, unxibelelwano ngefowuni, kunye ne-biotechnology. Zombini i-Oklahoma City kunye neTulsa zisebenza njengee-Oklahoma ze-anchor eziphambili zezoqoqosho, phantse isibini kwisithathu sama-Oklahomans ahlala kwimimandla yedolophu yeenkcukacha manani.
Umphathi wepropathi okanye umphathi wepropathi ngumntu okanye icandelo elihlawuliswe ngokusebenza kwepropathi yentlawulo yokuthenga, xa umniniyo engakwazi ukuzibandakanya ngokwakhe kwezo nkcukacha, okanye engenamdla wakwenza oko. Ipropathi inokuba yeyomntu ngamnye okanye ingabinomnini phantsi kwesihloko sesahlulo, inkampani yeebhloko zesabelo kwaye ingabhaliswa ukuba ibe yindawo yokuhlala, iofisi yokuthengisa kunye nezorhwebo okanye ukusetyenziswa kwemizi-mveliso. Imisebenzi eqhelekileyo elindelekileyo kumphathi wepropathi ibandakanya ukufumana / ukukhupha kunye nokusebenza ngokubanzi nabaqeshi kunye nokulungelelanisa neminqweno yomnini. Ezo zilungiselelo zinokufuna ukuba umphathi wepropathi aqokelele irente, ahlawule iindleko ezifanelekileyo kunye nerhafu, enze iingxelo zethutyana kumniniyo, okanye umniniyo unokudlulisela imisebenzi ethile aze aqhubane nabanye ngqo. Umphathi wepropathi unokwenza amalungiselelo eenkonzo ezininzi ezahlukeneyo, njengoko unokucelwa ngumnini wepropathi, ukuba ahlawule. Apho kuhlala indawo yokuhlala (ikhaya leholide, ikhaya lesibini) kuhlala abantu ngamaxesha athile, umphathi wepropathi unokwenza amalungiselelo okujonga ukhuseleko okuphezulu, ukuhlala ezindlwini, ukugcinwa nokuhambisa iimpahla, kunye nezinye izivumelwano zekhaya zalapho eziyimfuneko ukwenza umhlaba ulunge xa ​​umniniwo Indawo yokuhlala Ulawulo lwepropathi lungabandakanya iipropathi zorhwebo apho umphathi wepropathi enokuqhuba ishishini, kunye nokulawula ipropathi. Eminye imimandla inokufuna ukuba umphathi wepropathi abe anelayisensi yomsebenzi. Umphathi wepropathi unoxanduva oluphambili kumqeshi womhlaba kunye noxanduva lwesibini kwiarhente. Ubudlelwane nomphathi wepropathi enabo nomnini-ndawo kunye nomqeshi kubalulekile ekuyileni okulindelweyo kuwo omabini amaqela kwisivumelwano kuba omabini amaqela ayakufuna kwaye alindele amalungelo athile kunye nezibonelelo zazo.